78000-kii Kun Ee Hore Iskaga Diiwaangeliyey Gobolka Saaxil Oo La Filaayo Inay Kaadh Bedelada Qaataan 40,000-kun In Ka Yari,Musharraxiinta Baarlamaanka Quuddareynayey Iyo Doorkii Qurba Joogta Oo Meesha Kabaxay+Musharrax Cirro Oo Salliga Dhigtay Berbera,Gaadiidna U Diraya Meelaha Uu Codka Ka Filaayo Iyo Kulmiye Oo La Baafinayo Meel U Jaan Iyo Cidhib-dhigay Iyo Cimilada Berbera Oo Kulul | Berberatoday.com
78000-kii Kun Ee Hore Iskaga Diiwaangeliyey Gobolka Saaxil Oo La Filaayo Inay Kaadh Bedelada Qaataan 40,000-kun In Ka Yari,Musharraxiinta Baarlamaanka Quuddareynayey Iyo Doorkii Qurba Joogta Oo Meesha Kabaxay+Musharrax Cirro Oo Salliga Dhigtay Berbera,Gaadiidna U Diraya Meelaha Uu Codka Ka Filaayo Iyo Kulmiye Oo La Baafinayo Meel U Jaan Iyo Cidhib-dhigay Iyo Cimilada Berbera Oo Kulul
Berbera(Berberatoday.com)-Iyadoo Maalinta Berri ah 29-ka April, Magaaladda Berbera laga Bilaabaayo Qaadashada kaadh Codeynta, ayaa waxa gaabis ku yimi Abaabulka iyo Wacyegelinta Bulshadii Iska Diiwaangelisay ee Gobalka Saaxil ee loo baahnaa inay qaataan kaadhka Codeynta. Maadaama oo ay Cimilada Berberi tahay Kuleyl, oo hada laga soo xagaa baxay.
Sidoo kalena, Bulshadii u dhalatey gobolka Saaxil ee ku noolay Magaalooyinka Hargeysa iyo Burco iyo weliba jiidaha u dhexeeya magaalooyinkaa. Kuwasoo Markii hore ay Si weyn u Abaabuleen xubno Siyaasiyiin ah oo damacsanaa inay ka qaybgalaan Doorashada Baarlamaanka ee dib loo dhigay hadda iyo Sidoo kale Musharraxii la Inqilaabay ee Xisbigii Ucid Jamaal Cali Xuseen oo tacab badan iyo Ololle Maaliyad badani kaga baxday geliyey sidii Bulshadaas Gobolka Saaxil isku Diiwaangelin lahayd. Waxa kaloo Wacyegelinta dadkii Markii hore is Diiwaangeliyey kaalin weyn ka qaatey Bulshada Qurba jooga ah ee u dhalatey Gobolka Saaxil, kuwasoo Lacag badan kusoo bixiyey sidii Reer Saaxil Isku Diiwaangelin lahayeen.
Arrimahaas iyo kuwo kale oo ay kamid yihiin Abaaraha ba’an ee ka jira gobolka Saaxil, ayaa sababay inaanay Bulshadii Markii hore is Diiwaangelisay aanay hadda uba billayn inay doontaan kaadh bedelka Codeynta.
Dhinaca kale, Musharraxiinta Xisbiyadda ku loollama Doorashada Madaxtooyadda ee Waddani iyo Kulmiye ayaa midna Waxa uu Ollolle ba’an ku lahaa Wacyegelinta Bulshada uu Filaayo inuu Codka ka helayo. Waxana labadii Habeen ee u dambeeyey Magaaladda Berbera salliga dhigtay Musharraxa Xisbiga Waddani Mudane Cabdiraxmaan Cirro, kaasoo Dadka faraya Qaadashada Kaadh Codeynta, sii isbedel Siyaasadeed dalka uga dhaco, Waxanu Baabuur kaga soo guraya dadka uu Codka ka filaayo ee Deegaanka Gobolka Saaxil.
Iyadoo Dhinaca kale, Xisbiga Kulmiye laga la’yahay Wacyegelinta Bulshada Saaxil, isla Markaana aanay madaxda Xisbigaasi saameyn wax dedaal ah oo lagu faraayo Qaadashada kaadhka ee Dadkaa. Waxa kaloo, Xisbiga Kulmiye u dheer Abaabul la’aanta iyo maqnaan shiyaha Hoggaanka Xisbiga Kulmiye ee Gobolka Saaxil. Ma jiro Xafiis iyo Madax Muxtarim ah oo Kulmiye ku Leeyahay Gobolka. Mana shaqeeyo Xafiis Kulmiye ee Gobolkaa Saaxil, Waxanay Bulshada Berberi in badan is waydiisa Sababta Xisbiga Kulmiye Madax Ugu magacaaaban waayey Gobolka.
Si Kastaba ha ahaatee, Tirida Gobolka Saaxil Markii hore Iska Diiwaangelisay ee loo baahan yahay inay qaataan kaadhka Codeynta ayaa ahayd, 78000 kun, iyadoo hadii arrimuhuu sidan u sii socdaan laga Cabsi qabo inay dadka kaadhka qaatey ay noqdaan 40,000 kun in ka yar.
Waxa kaloo arimaha aynu soo sheegnay barar socda Cimiladii gaarka u ahayd Gobolka Saaxil ee Kulaylka oo bilaamay .
La soco qaybaha dambe Wixii kasoo Kordha Berberatoday.com